Mashruuca Sheeko-qorista Qoraalka Qoyska oo Isku keenaya Barayaasha | maqaalka
Sheeko-sheegiddu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah akhris-qorista, iyadoo aan loo eegin luqadda uu qofku ku hadlo. Taasi waa sababta macallimiinta barnaamijyada Akhriska Qoyska ee Dugsiyada Dugsiyada Robbinsdale loogu talagalay ardayda waaweyn ee wax barta iyo carruurtooda da'da dugsiga barbaarinta ahi ay u soo saareen mashruuc u gaar ah, iskaashi ardayda.
Waalidiinta barnaamijka ku jira, ee baranaya Ingiriisiga ama ka shaqeynaya waxbarashadooda 'GED' ee fasallada Barnaamijka Tacliinta Dadka Waaweyn , waxay ku barteen qaybaha sheekada ee fasalka waxbarashadooda waalidka. Iyagoon ogayn carruurtooda da'da dugsiga xannaanada, waalidku waxay doorteen xoolo cufan si ay hadiyad ugu keenaan ilmahooda. Waalidiintu waxay qoreen sheeko carruureed oo ku saabsan xayawaanka cufan, kaas oo lagu daray fariin ama anshax.
Markii sheekooyinka la qoray, waalid kasta wuxuu ilmahiisa kaga yaabiyey xayawaanka iyo sheekada la buuxiyey. Kadib markay heleen layaabkoodii, caruurtu waxay heleen fursad ay wax ku darsadaan. Bog kasta oo sheekada ka mid ah, carruurtu waxay sawireen sawir si ay u muujiyaan waxa la qoray.
"Carruurtu waxay si aad ah ugu riyaaqeen inay soo dhoweeyaan xoolahooda cufan, maqlaan sheekooyinka ay qoreen waalidkood, ka dibna waxay fursad u heleen inay u abuuraan sawirro sheekada ah," ayay tiri Michelle Berscheid, waalid ruqsad haysta iyo barbaariye qoys. Berscheid ayaa naqshadeeyay oo baray cutubka sheekada.
Sanadkan inta lagu gudajiray COVID iyo fasalada khadka tooska ah, shaqaalaha barnaamijka Akhriska Qoyska waxay si adag ushaqeynayeen inay keenaan guryo barasho gacmo furan. Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa waalidiinta iyo carruurta aan weli gaarin dugsiga inay si wadajir ah uga qayb galaan iskuulka xarunta waxbarashada ee Crystal. Sannad dugsiyeedkan dhexdiisa, ardaydu waxay u diyaar garoobayeen fasalka barbaarinta fasallada fasalka ah ee ay kula xiriiraan asxaabta fasalka, heesaha, dhageystaan sheekooyinka, xisaabta, xirfadaha akhris-qorista, iyo inbadan! Intaa waxaa sii dheer, ardayda ku hawlan waxqabadyada barashada internetka iyo sidoo kale waxqabadyo gacan-qabasho ah oo ay diyaariyeen macallimiintu oo ay soo qaadeen waalidiinta
“Sida ardaydayada qaangaarka ah, carruurteena dugsiga xannaanadu waxay u xiisay imaatinka dugsiga, markay arkaan macallimiintooda iyo inay la joogaan asxaabtooda,” ayay tiri Julie Kleve, iskuduwaha tabaruca iyo macallinka.
Mashruuca sheeko-sheekeysiga ayaa ka helay jawaab celin aad u wanaagsan waalidiinta iyo carruurtooda. "Waxaan waalidiinta la wadaagay inay carruurtoodu rabaan inay akhriyaan buugaagta ay qoreen marar badan, gaar ahaan markay sariirta la seexdaan xayawaankooda cufan," ayuu yiri Berscheid.
Ugu dambayntii mashruuca, carruurta aan weli gaarin dugsiga iyo waalidiinta waxay fursad u heli doonaan inay la wadaagaan buugaagta sheekadooda gaarka ah kooxda akhris-qorista qoyska inta lagu jiro fasalka soo socda ee waalidka / ilmaha.
"Mashruucan sheeko-qorista ah wuxuu caddeeyay inuu yahay mashruuc kor u qaadaya waalidka iyo ardayda dugsiga xannaanada iyo barbaarinta - iyo runti inay tahay waddo lagu keeno xiisaha barashada guriga," ayuu yiri Berscheid.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijka Akhriska Qoyska, fadlan wac 763-504-8300.